Torohevitra 10 ambony hahazoana fampisondrotana karama tsara kokoa | Martech Zone
Torohevitra 10 ambony hahazoana fampisondrotana karama tsara kokoa
Talata, Novambra 14, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Raha mbola tsy tsikaritrareo dia manana tranokala hafa antsoina aho Calculator fandoavana. Manantena aho fa hitanareo fa mahasoa izany. Amin'ny maha mpitantana ahy dia tsy maintsy nikajy ny fampakarana karama ho an'ny mpiasako foana aho - io tranonkala io dia nitombo noho ny filàna hanamora ny fanaovana kajy.
Te-hanampy toro-hevitra vitsivitsy amin'ilay tranokala aho momba ny fomba hahazoana fiakaran'ny karama tsara kokoa. Heveriko fa ny tambin-karama dia singa iray ilaina amin'ny asa rehetra - io no tena fototry ny fanekena rehetra. Ny fahazoana "misaotra" na "asa tsara" dia tena lehibe - saingy tsy mametraka vola ao am-paosinao foana izany.
Nandritra ny taona maro dia hitako fa mora kokoa ny resaka fandoavam-bola, na amin'ny maha mpiasa na amin'ny maha mpitantana ahy - ka ireto misy toro-hevitra 5 momba ny fampisondrotana ny karama tsara kokoa.
Raha mieritreritra ianao fa mendrika izany dia aza manaiky ny fiakarana karama omena anao. Matetika ny mpitantana dia manana fahendrena ao anatin'ny tetibolany ary matetika afaka manome fiakarana tsara kokoa noho ny tena atolotra.
Amin'ny famerenanao, aza hadino ny miresaka amin'ny sanda entinao amin'ny orinasa fa tsy ny karama. Zava-dehibe ny fahitan'ny mpampiasa anao amin'ny fampiasam-bola. Raha mampiasa vola tsara ianao, dia tsy hampaninona azy ireo ny mividy tahiry bebe kokoa ao aminao.
Aza ampitahanao amin'ny mpiasa hafa ny tenanao. Tsy mahasalama ny mampitaha ny tenanao amin'ny mpiasa hafa mety mety hahazo vola betsaka kokoa noho ianao. Matetika dia vonoin'ireo mpitantana izany - miaraka amin'ny fanombatombanana ny fahombiazan'ny asa, ny fampiakarana karama dia ampahany mampanaintaina amin'ny asany. Ny fampitahana ny tenanao amin'ny hafa dia mety hampanalavitra anao mihoatra ny manampy anao. Ary koa, mampitaha ny tenanao amin'ireo 'vondrona' mpiasa hafa miaraka aminao amin'ireo mpiasa hafa. Zava-dehibe ny ahazoanao anarana ho an'ny tenanao.
Fantaro ny vidin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny faritra misy anao. Raha atolotra anao ny fiakarana 3% amin'ny faritra iray misy fiakarana vidim-piainana 4%… vinavina inona ?! Vao avy nihena karama ianao!
Mahazoa fifanarahana isaky ny fanombanana / fampakarana karama amin'izay tena karamanao ary koa ny zavatra tsy maintsy tratrarinao mba hahazoana fiakarana tsara. Raha manome tanjona 5 anao ny mpitantana anao mba hahazoanao fiakarana 5%… dia alao antoka fa mahatanteraka ireo tanjona ireo ianao ary mampahatsiahy azy ny fahombiazanao - na dia alohan'ny famerenanao manaraka aza.
Aza matahotra mangataka fiakarana karama ivelan'ny tsingerinao mahazatra. Raha nandondona ny ba kiraro an'ny mpitantana anao na ny orinasanao ianao dia araraoty ny fotoana hangatahana amin'izy ireo haneho ny fankasitrahany amin'ny alàlan'ny fampiakarana karama. Raha tena tsy avela mihitsy dia mangataha bonus.
Fantaro hoe inona ny refin'ny karamanao ho an'ny faritra misy anao sy ny asanao. Betsaka ny tranonkala misy an'ity fampahalalana ity, ny iray maimaim-poana dia Indeed.com.
Raha sendra ady sarotra tokoa ianao, mangataha fanadihadiana momba ny karama any amin'ny departemantan'ny Human Resources na manambola ho an'ny tenanao manokana. Salary.com dia manolotra fanadihadiana momba ny karama feno Eto.
Afantohy ny ezaka ataonao any am-piasana amin'ny tanjona izay misy fiatraikany amin'ny farany ambany. Varotra fanampiny, fitazonana mpanjifa tsara kokoa, serivisy ampiana sanda, fanatsarana ny fomba fanaovan-javatra, fanodinana teti-bola… mora kokoa ny mangataka fampakarana karama rehefa manome dolara marobe sy sento amin'izay ampidirinao amin'ny farany ambany.
Mampalahelo fa miaina amin'ny andro iray isika izay misy asa be dia be ho an'ny mpiasa mahay sy mahay. Ny fiakarana karama lehibe indrindra mety ho hitanao fa mahatratra anao dia ilay azonao rehefa miala amin'ny mpampiasa anao ianao ary mahita asa hafa. Mampalahelo, fa marina! Misy hatrany ny tifitra lava mety hahafahanao mahazo tolotra mifanohitra alohan'ny andehananao fa tokony hanontany tena ianao hoe maninona izy ireo no manapa-kevitra ny hanolotra izany aminao alohan'ny handao fa tsy hanome anao anao voalohany. Tsy tokony handray ny fandrahonana hiala ianao mba hahazoana ilay tambiny mendrika anao.
Oviana no lasa milay ny Spice taloha?
Miara-miasa amin'ny Organisation Philanthropic ve ianao?